Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao farany momba ny Hawaii » Hawaiian Airlines dia manendry tale mpitantana vaovao roa
Airlines • Airport • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany momba ny Hawaii • Vaovao • People • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny Hawaiian Airlines androany dia nanendry an'i Alanna James ho tale mpitantana ny hetsika maharitra. Amin'ity andraikitra vaovao ity, i James dia hitarika ny fandaharan'asa Environmental, Social and Governance (ESG) manerana ny zotram-piaramanidina lehibe indrindra sy maharitra indrindra ao Hawai'i, hanara-maso ny tanjony hahatratrarana ny famoahana karbônina tsy misy aotra amin'ny taona 2050, ny fandrosoan'ny fahasamihafana sy ny ezaka fampidirana, ary ny hafa. hetsika maharitra.
Hawaiian Airlines dia nanendry talen'ny fitantanana vaovao momba ny hetsika maharitra sy ny fifandraisan'ny mpampiasa vola.
Hawaiian Airlines manamafy ny ezaka maharitra amin'ny fifantohana amin'ny olana momba ny fiovan'ny toetr'andro ihany koa.
Hawaiian dia nanome toky fa hanonitra ny entona avy amin'ny sidina iraisam-pirenena mihoatra ny 2019.
"Ny fahatakarana midadasika an'i Alanna momba ny asa ataontsika sy ny fomba fiasany stratejika dia ahafahantsika manafaingana ny portfolio-n'ny tetikasa ESG mitombo mba hanohizana ny hahatonga antsika ho zotram-piaramanidina maharitra kokoa," hoy i Avi Mannis, filoha lefitra zokiolona momba ny varotra ao amin'ny Hawaiian Airlines.
James dia talen'ny fitantanana ny fifandraisan'ny mpampiasa vola any Hawaiian nanomboka tamin'ny tapaky ny taona 2019. Hatramin'ny nidirany tao amin'ny zotram-piaramanidina tamin'ny taona 2011, dia nitana toerana teo amin'ny paikady sy ny fanovana, ny fandrindrana sy ny famakafakana ara-bola izy, ary niandraikitra ny fampandehanana turboprop 'Ohana by Hawaiian' teo aloha. Talohan'ny Hawaiian dia niasa tamin'ny tetikady sy ny fampandrosoana ny fandraharahana tao amin'ny TACA Airlines any El Salvador izy. Manana mari-pahaizana licence momba ny toekarena avy amin'ny Dartmouth College i James, ary mari-pahaizana maîtrise momba ny fitantanan-draharaham-barotra avy amin'ny IESE Business School any Barcelona, ​​Espaina.
Alanna James, tale mpitantana ny hetsika maharitra
"Faly aho ary manantena ny hampandroso ny asa ESG mampientanentana sy misy fiantraikany amin'ny ekipanay rehefa manitatra ny orinasanay izahay amin'ny fifantohana amin'ny fahombiazana sy ny faharetana," hoy i James.
Ny Hawaiian dia nanamafy ny ezaka maharitra, araka ny voamarika ao amin'ny orinasa 2021 Corporate Kuleana tatitra. Ny fiatrehana ny fiovaovan'ny toetr'andro dia mijanona ho iray amin'ireo laharam-pahamehan'ny ESG any Hawaii. Ny zotram-piaramanidina dia nanolo-tena hanatratra ny entona karbônina net-zero amin'ny 2050 amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola mitohy, sidina mahomby kokoa, fanonerana karbônina, ary fanentanana indostrialy ho an'ny fanavaozana ny fifamoivoizana an'habakabaka sy ny fampandrosoana sy ny fihanaky ny solika maharitra. Nanomboka tamin'ity taona ity, nanome toky ny Hawaiiana fa hanonitra ny entona avy amin'ny sidina iraisam-pirenena mihoatra ny haavon'ny taona 2019, mifanaraka amin'ny tetik'adin'ny International Civil Aviation Organization's Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA).
Nanambara ihany koa ny Hawaiian ny fanendrena an'i Ashlee Kishimoto, talen'ny fitantanan'ny Hawaiian momba ny asa momba ny harena voajanahary nanomboka tamin'ny taona 2018, ho tale mpitantana ny fifandraisana amin'ny mpampiasa vola, manomboka anio. Kishimoto, izay nitarika ny sampan-draharaham-pifandraisana teo aloha teo anelanelan'ny taona 2013 sy 2017, dia ho tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ny fifandraisan'ny Hawaiiana amin'ireo mpampiasa vola sy ireo mpandray anjara ara-bola hafa.
Ashlee Kishimoto, tale mpitantana ny fifandraisana amin'ny mpampiasa vola
"Ny fiafaran'ny tatitra ara-bola matanjaka an'i Ashlee dia hanome ny mpampiasa vola ny fomba fijery mazava momba ny fomba fijery ara-bola eo am-pitadiavana ny fivoahana amin'ny valan'aretina COVID-19," hoy i Shannon Okinaka, tompon'andraikitra ara-bola ao amin'ny Hawaiian Airlines.
Ho fanampin'ny traikefany amin'ny fifandraisan'ny mpampiasa vola, i Kishimoto dia talen'ny tatitra SEC sy ny fanarahan-dalàna SOX, ary talen'ny fanaraha-maso ny orinasa. Nahazo mari-pahaizana licence momba ny kaonty tao amin'ny Oniversiten'i San Francisco izy.